ဆံပင်ညှပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အမေးများသောမေးခွန်းများ - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ သြစတြေးလျအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျပို့စ်ကိုအသုံးပြုသည်။ မြောက်အမေရိက၊ အာရှနှင့်ဥရောပတို့တွင် FEDEX ကိုအသုံးပြုသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခုခုမှတင်ပို့! ကျွန်ုပ်တို့၏ FEDEX Express သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိမည်။
ဟုတ်ပါသည်။ သင်ကတ်ကြေးကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။ Facebook တွင်ဖြစ်စေ၊ Email မှဖြစ်စေတိုက်ရိုက်စာပို့နိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကသင်၏ထုတ်ကုန်ကိုနောက်လာမည့်ညှပ်ညှပ်ဖြင့်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။
သြစတြေးလျမှာတွေ့ရတဲ့အကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတွေပါ Yasaka, Juntetsu, Mizutani, Fuji, နှင့် Jaguar။ အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်များကိုရှာဖွေနေသောဆံပင်ညှပ်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများကဂျပန်ကတ်ကြေးများကိုအကောင်းဆုံးညှပ်ပေးသည့်အရာနှင့်၎င်းအားဤမျှထူးခြားသောကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်ဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးမြန်းလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
Scissor Pouches ဆိုတာဘာလဲ။
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများသည်၎င်းတို့အားနာရီနှင့်အဆုံးသတ်ဖြတ်တောက်နိုင်စေရန်နှင့်ကတ်ကြေးများကိုလုံခြုံစွာထားနိုင်သောကြောင့်ကတ်ကြေးအိတ်ငယ်များကိုမကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ ကတ်ကြေးအိတ်များနှင့်အိတ်များခါးပတ်ပတ်ပတ်။ ၂-၆ ညှပ်အကြားရှိတတ်သည်။ ဆံပင်ကျွမ်းကျင်သူများသည်အရည်အသွေးမြင့်အိတ်များကိုဂျပန်ကတ်ကြေးဖြင့်ကြည့်ရှုကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
Ergonomics သည်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်နှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်လက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသည်အရေးကြီးသည်။ သင်သည်အဆင့်မြင့်ပညာသင်အဆင့်သို့ရောက်သောအခါထပ်ခါတလဲလဲဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်ကြွက်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သင်၏ဘယ်သန်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကတ်ကြေး၏ Ergonomics ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးများကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။
လက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသည်အလွန်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Japan Scissors သည်မည်သည့်ဘတ်ဂျက်နှင့်မဆိုလက်ဝဲဖက်ဂျပန်နှင့်ဥရောပညှပ်အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ဘယ်ဘက်ကတ်ကြေးများသည်ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိဓါးထိပ်တွင်ချွန်ထက်သောအစွန်းရှိသည်။
ညာဘက်ညှပ်များကို သုံး၍ လက်ဝဲဆံပင်အလှနှင့်ဆံပင်ညှပ်များသည်ကတ်ကြေးများကိုသဘာဝမဟုတ်သောအနေအထားတွင်ထားရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောတင်းမာမှုများကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒဏ်ရာများနှင့်ဒဏ်ရာများရရှိလေ့ရှိသည်။ သို့ကြည့်ပါ Yasaka ဘယ်သန်, Mina, Ichiro နှင့် Jaguar ဒီမှာ Lefty ကတ်ကြေး။
Ergonomic ကတ်ကြေးများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Ergonomics သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောအနေအထားကိုဖန်တီးသည်။ လက်ရှိခြင်း၊ လက်မောင်း၊ ပခုံးနှင့်စသည်တို့အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော ergonomics သည်အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်မှုများကိုရရှိရန်ကူညီပေးပြီး carpal tunnel syndrome, tendinitis, bursitis စသဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
Offset၊ Straight နှင့် Crane Scissor Handles အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Japan Scissors သည်ဤသုတေသနကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်အသစ်တစ်လုံးဝယ်သောအခါအလွန်ကောင်းမွန်သောအနားများထက်ညှပ်လက်ကိုင်များသည်အရေးအပါဆုံးအချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရှည်လျားသောကာလများအတွက်ဖြတ်တောက်စဉ် strain ကိုလျှော့ချသောသူတို့၏ ergonomics ကြောင့် offset လက်ကိုင်ကတ်ကြေးလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ offset ကတ်ကြေးများသည်သင်၏လက်ကိုတင်းတင်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်ပိုမိုသဘာဝကျသည့်နေရာတွင်ထားခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အဆိုပါ crane လက်ကိုင်ကတ်ကြေးသူတို့သင့်ရဲ့တံတောင်ဆစ်ကို drop ခွင့်ပြုအဖြစ် ergonomic လက်ကိုင်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများအတွက်ပြင်းထန်သော ergonomics ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများကိုသင်ရရှိနိုင်သောအရွယ်အစားများမှာ ၄.၅ လက်မမှ ၈ လက်မအထိရှိသည်။ သင်၏လက်ချောင်းကိုဆန့ ်၍ ဓါးသွား၏အရှည်နှင့်လက်ဖဝါးမှကတ်ကြေးအရှည်ကိုသင်အလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးအများစုသည် ၅၊ ၅.၅ နှင့် ၆ လက်မနှင့်အဆင်ပြေပြီးအမျိုးသားအများစုသည် ၅.၅၊ ၆ နှင့် ၆.၅ တို့ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သြစတြေးလျတွင်သင်အသုံးပြုလိုသောကတ်ကြေးအရွယ်အစားကိုမည်သို့ပြောရမည်နည်း။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
ဆံညှပ်ညှပ်ညှပ်ပေးမှုအာမခံသည်စုံတွဲတစ်တွဲကိုကြာရှည်စေလိုသောဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအာမခံချက်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ကိရိယာတွေလောက်ပဲကောင်းတာကြောင့်သင်ဆက်လက်တည်မြဲစေမယ့်သူတွေကိုသေချာရွေးချယ်ပါ။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများအတွက်အာမခံသည်ထုတ်လုပ်သူသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးကြာရှည်ခံမှုနှင့်မည်မျှယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းဖော်ပြရန်အမြန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောသို့မဟုတ်စျေးပေါသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင့်အားမည်သည့်နိုင်ငံသို့သူတို့ထုတ်လုပ်သည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်သင်သည်ဂျပန်၊ ဥရောပ၊ ကိုရီးယားနှင့်ထိုင်ဝမ်တို့ကိုအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ဒေသများအဖြစ်ရှာဖွေလိမ့်မည်။ အဆိုးရွားဆုံးအရည်အသွေးနိမ့်ပြီးစျေးပေါသောကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံသည်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်နေသည်။
အဆိုပါ Hollow Ground နှင့်ခုံး Edge Blades အကြားခြားနားချက်?
ခုံးအစွန်းဓါးများသည်အလွန်ကောင်းသောချွန်ထက်သောအနားများရှိပြီးဓါးသွား၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင်တူညီသောကြိတ်ခွဲမှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောချွန်ထက်သောအနားခုံးကွေးသောကတ်ကြေးများကိုပေးသည်။ အမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသောဂျပန်သံမဏိများကိုရွေးချယ်ပြီးခုံးအနားသတ်ဓါးများကို ၀ ယ်သည့်အခါအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိကတ်များပေါ်တွင်သာတည်မြဲသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
ခုံး Edge သို့မဟုတ် Bevel Edge ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး?
Bevel အစွန်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုကတ်ကြေးကိုအလုပ်သင်နှင့်ကျောင်းသားဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းတွင်တွေ့လေ့ရှိသည်။ ခုံးအစွန်းဓါးများသည်ပိုမိုပြတ်သားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိများပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွမ်းကျင်သူများကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးသောဆံပင်ညှပ်ဆံများထုတ်လုပ်သည့်အတွက်ခုံးအနားရှိဓါးတိုများကိုကြည့်ရှုပြီးလုပ်ဆောင်မှုကိုဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
သင်မ ၀ ယ်ခင်သင့်ကတ်ကြေးကိုကိုင်တွယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာဘယ်အရွယ်အစားနဲ့ဘယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကသင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ပါပဲ။ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းညှပ်များအတွက်အသုံးအများဆုံးအရွယ်အစားမှာ ၅.၅ လက်မအရွယ်ဖြစ်ပြီးလူကြိုက်အများဆုံး ergonomics သည် offset ergonomics ဖြစ်သည်။